လက်ပ်တော့ဖို့ပြင်ပကဗီဒီယိုကဒ်ချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို - ဗီဒီယိုကဒ် - 2019
သငျသညျအစဉျအမွဲအစဉ်အဆက်သင်၏အကြိုက်ဆုံး site ကို site ကို dial နှင့် Access ၏ငြင်းပယ်ရင်ဆိုင်ရရှိသည်, အဖြစ် သယံဇာတသော့ခတ်ခဲ့သလဲ သင့်ရဲ့အဖြေကို "Yes" ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်လျှင်, သင်ဆက်ဆက်က Google Chrome အတွက်နေရာလေးကို Browser-ZenMate extension ကိုကြွလာတော်မူပါလိမ့်မယ်။
ZenMate - သင့်ကိုမှန်ကန်အိုင်ပီ-လိပ်စာများကိုဖုံးကွယ်ထားရန်အကြီးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်တယ်, ဒါသင်ပိတ်ဆို့ site ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်, သူတို့ကအလုပ်၏နေရာသို့မဟုတ်သူတို့ကိုရန်လက်လှမ်းမှာသင်၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပိတ်ဆို့ပြီရှိမရှိနေပါစေတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်ကန့်သတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ZenMate install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
သင်ကဆောင်းပါး၏အဆုံးမှာ link ကိုညွှန်ကြားအဖြစ် Google Chrome ကို browser ကိုများအတွက် extension ကို ZenMate install နှင့်စတိုးဆိုင် extension များကနေတဆင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုကျနော်တို့အသေးစိတ်ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
Google Chrome ကရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာမီနူးခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ပြသစာရင်းထဲတွင်မှ scroll "နောက်ထပ် Tools များ" - "Extensions".
သင်ကအရမ်းအဆုံး-and ကလစ်ဆင်းသွားကြဖို့လိုအပ်ပါရှိရာတစ်ဦးကပြတင်းပေါက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် "ပိုပြီး extensions တွေကို Get".
ဒီတော့ကျနော်တို့က Google Chrome ကို extension ကိုစတိုးဆိုင်ရန်သင့်တယ်။ စာမျက်နှာရဲ့ဘယ်ဘက် pane ထဲကကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့၏တပ်မက်လိုချင်သောအချဲ့ထွင်၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ရှာဖွေရေး string ကိုဖြစ်ပါသည် - ZenMate.
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် "Extensions" ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ extension ကိုစာရင်းဆိုလိုပေသည်ရှာ၏။ ဒါဟာ၏ညာဘက်ရန်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Install".
ZenMate သင့် browser ထဲမှာ installed ပါလိမ့်မည်ပြီးတာနဲ့တိုးချဲ့မှုအိုင်ကွန်၏အပေါ်ဆုံးညာဘက်ထောင့်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
1. ထိုခဏခြင်းတွင်တပ်ဆင်ပြီးနောက်သင်ပရီမီယံအင်္ဂါရပ်များချဲ့ထွင်ရန်အခမဲ့အစမ်း access များအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်ရှိရာ developer ၏စာမကျြနှာမှ redirected နေသောဘရောက်ဇာကို ZenMate ။
2. သင်ဘရောက်ဇာထဲမှာ icon ကိုတိုးချဲ့ရန်, ဆိုက်ဖို့မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်ဝင်ပေါက်ဖြည့်စွက်ပြီးတာနဲ့ ZenMate ၏တက်ကြွသောအလုပ်အကြောင်းပြောဆိုကြလိမ့်မည်အကြောင်း, အစိမ်းရောင်မှအပြာကနေပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။
3. တိုးချဲ့မှု၏အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ မျက်နှာပြင်ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်တဲ့ operating status ကိုဖြစ်နှင့်အမည်မသိကို web surfing များအတွက်တိုင်းပြည်ကိုထားမည်သည့်အသေးစား ZenMate menu ကို, ပြပေးလိမ့်မယ်။
4. သငျသညျယခုအသစ်တိုင်းပြည်ရွေးဖို့ဗဟိုအိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ချည်ထားလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်အသီးသီးအခြားနိုင်ငံများတွင်ပိတ်ဆို့သောပေါ်ပြူလာအမေရိကန် web-based service ကိုရယူချင်နိုင်ငံများစာရင်းတွင်၌သင်တို့ကိုသတိပြုပါရန်လိုအပ်ပါတယ် "အမေရိက၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်".
5. သငျသညျမှရရှိနိုင်အခမဲ့ဗားရှင်း ZenMate နိုင်ငံများစာရင်းတွင်လျှော့ချမသာပေမယ့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမြန်နှုန်းအတွက်န့်အသတ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအထူးဂရုပြု။ သငျသညျထို program ၏ paid version ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စီစဉ်ကြဘူးလျှင်ထိုကွောငျ့, ထို့နောက် nezabloktrovannyh က်ဘ်ဆိုက်များများအတွက်ပယ်ပိုကောင်း ZenMate အလုပ်လုပ်ကြသည်။
ဒီအဆုံးရန်, menu က extension ကို၏အောက်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာတစ် slider ကိုဖြစ်ပါသည်, activated သို့မဟုတျ, ဆန့်ကျင်ပေါ်နေကြသည်ကို click, ချဲ့ထွင်အလုပ်ပိတ်။
ZenMate - access ကိုတစ်ရိုးရှင်းပြီးလုံးဝလုံခြုံစိတ်ချရလမ်းသင်၏နိုင်ငံအတွင်းက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်အသုံးမပြုနိုင်သည့်ပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ nice interface နဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အလုပ်အဆင်ပြေဝဘ်နှင့်လျှို့ဝှက်တဲ့အဆင့်မြင့် surfing နှင့်တစ်ခုလုံးကိုထုတ်လွှင့်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်သေချာနှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
အခမဲ့ ZenMate Download
https://termotools.com my.termotools.com © ဗီဒီယိုကဒ် 2019